Top 20 Quán súp cua ngon giá rẻ bậc nhất ở Sài Gòn – TPHCM | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Top 20 Quán súp cua ngon giá rẻ bậc nhất ở Sài Gòn – TPHCM | Excitinghochiminhcity
Kune wese mugari weSaigon, muto wegakanje chikafu chinonaka chausingakwanise kupotsa nekuda kwekunaka kwakasiyana uye kwakanakisa kuravira. Kana uri kuronga kunakidzwa nendiro iyi, tevera kenhhomestay.com kuti uuye kumaresitorendi makumi maviri epamusoro ipapo. muto wegakanje yakakurumbira pazasi.
ZVIRI MUKATI ZVIKURU ZVIRI MUNYAYA:
1 Inonaka yega soup zvitoro pakati peSaigon – HCMC
1.1 1-chitoro muto wegakanje Notre Dame Cathedral
1.2 2-Mambo Moc
1.3 3-Hoi An Crab Soup Shop
2 Cheap crab soup shops muSaigon – HCMC
2.1 4-Co Bong Restaurant
2.2 5-Zvitoro muto wegakanje Mac Dinh Chi
2.3 6-Chrysanthemum Shop
2.4 7-Quan Thuy
3 Zvitoro zvine mukurumbira uye zvinonaka zvekanje soup muSaigon – Ho Chi Minh Guta
3.1 8-Quan Dung
3.2 9-Co Lan Restaurant
3.3 10-Quan Thao
4 Zvitoro zvinonaka zvekanje soup muguta zvakakodzera kunakidzwa nazvo
4.1 11-Musika mutete
4.2 12-Le Quang Dinh Restaurant
4.3 13-Tran Doan Khanh Restaurant
5 Wongororo yezvinonaka uye zvakachipa magaka soup zvitoro muSaigon – Ho Chi Minh Guta
5.1 14-Dang Van Ngu Restaurant
5.2 15-Chitoro 250
5.3 16-Banana Masiya Anonamira Rice Resitorendi
5.4 17-Capital Market Shop
6 Top inonaka gakanje soup zvitoro muHCMC
6.2 19-Quan Hang
6.3 20-Nguyen Tri Phuong Restaurant
Inonaka yega soup zvitoro pakati peSaigon – HCMC
1-chitoro muto wegakanje Notre Dame Cathedral
Kero: 86 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, Dunhu 1
Maawa ekuvhura: 11.00-21.00
Mutengo: 15,000-30,000 VND
Tichitaura zvezvitoro muto wegakanje Iyo inonyanya kuzivikanwa muSaigon, zvirokwazvo nzvimbo yekudyira yemugwagwa iri paNotre Dame Cathedral ndiyo sarudzo yakakwana.
Poto yemuto unopisa, unopfungaira wakaiswa patrolley inoita kuti vanodya vafare
Soup inobikwa nemuridzi zvakapfuma kwazvo, ine nyama yegakanje yakawanda, kusanganisira howa hweshiitake, zamu rehuku, saka muto wacho wakakora kwazvo. Kunyanya, mundiro yega yega yesobho, kune mamwe mazai maviri akanaka ezvihuta ari kukumbira kudyiwa.
Kero: 32 Hoa Hung, Ward 13, Ruwa 10
Maawa ekuvhura: 6.30-22.00
Mutengo: 17,000-20,000 VND
Imwe kero yekutengesa muto inofarirwawo nevanhu veSaigon ndeyeMoc soup shop.
Moc inorumbidzwa nekunaka kwayo uye inonaka
Soup Makakanje emuresitorendi anowedzerwa nehuku yakachekwa nehowa, izvo zvakabatsira mukugadzira kuravira kwakapfuma uye kunokwezva kunoita kuti chero vanodya vakakanganwe nzira yekumba kana vachinakidzwa. Sopu inopihwa mundiro chena yeporcelain inotaridzika yakachena uye yakanaka.
3-Hoi An Crab Soup Shop
Kero: 95 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, Dunhu 1
Maawa ekuvhura: 6.30-22.30
Mutengo: 12,000-25,000 VND
Ndiyo kero yekudya muto gakanje Chikafu chinonaka chinodiwa nevakawanda vekudya, chii muHoi Iresitorendi inogona kukunda nhamba yakakura kudaro yevadyi?
Ndiro hombe yemuto wegakanje ine nyama yakawanda mukati
Nzvimbo yeresitorendi yakachena kwazvo, yakakura, uye nzvimbo yacho iri nyore kuwana. Kunze kwemuto wegakanje, chitoro chinotengesawo mamwe akawanda anonaka uye akapfuma soups ausingafanire kupotsa senge soup yehuku, oyster crab soup, nezvimwewo, chikamu chega chega chine mazai akawanda ane mafuta.
READ Top 16 Món ăn sáng phổ biến của người Việt | Excitinghochiminhcity
Cheap crab soup shops muSaigon – HCMC
4-Co Bong Restaurant
Kero: 166 Pho Co Dieu, Dunhu 11
Maawa ekuvhura: 14.00-21.00
Seresitorendi inonaka yave iripo kweanopfuura makore makumi maviri, muto wegakanje unonaka Co Bong zvakare ikero yekunakidzwa iyo iwe haufanirwe kupotsa.
Kubva pachinhanho chepfupa muto chave chakanyatsojeka, hazvishamisi kuti muto pano unoyevedza
Kunyangwe ichingori nzvimbo yekudyira yepadivi, asi soup brand yeCo Bong ine mukurumbira zvekuti kunyangwe vatengi vekunze vanofanirwa kumirira mumutsara kuti vafare. Chitoro ichi chine soup mbiri dzakakosha dzegakanje, ari zai gakanje soup uye muto wehuku, ayo ari manyoro uye akarungwa zvizere.
5-Zvitoro muto wegakanje Mac Dinh Chi
Kero: 59C Mac Dinh Chi, Dunhu 1
Maawa ekuvhura: 7.00-1900
Mutengo: 17,000-25,000 VND
Kunyangwe iyo nzvimbo yekudyira inotaridzika yakapusa uye yakapusa, asi iyi ndiyo nzvimbo yekuzvarwa kwendiro muto wegakanje Yakanakisa muSaigon.
Mundiro yemuto, mune ese mazai, zvihuta uye coriander inonhuhwirira
Soup muchitoro inofarirwa zvakanyanya maererano nekunaka. Soup inonamira, inopisa uye inopisa, ine nyama yegakanje yakawanda, iri nyore kudya, hazvishamisi kuti vose vanodya vanonakidzwa nazvo zvokuti vanokanganwa nzira yekumba.
Kero: 1 Hoa Cuc, Ward 7, Phu Nhuan District
Maawa ekuvhura: 14.00-1900
Yakasiyana nemashops muto wegakanje Mukuwedzera, mundiro imwe neimwe yeHoa Cuc’s soup, zvimedu zvishoma zvechingwa dema zvinowedzerwa kuti zvive zvinonaka uye zvinoshamisa zvikuru.
Ndiro yesoup ine zvakawanda zvekuisa muchitoro
Nekuti resitorendi yakazara vanhu, dzimwe nguva paunouya kuzodya, unotofanira kugara kune imwe nzira. Mukudzoka, soup pano inonaka kwazvo, inotapira uye inofananidzwa. Menyu yezvikafu zveparutivi inofarirwawo nekupfuma kwayo uye kunyanya kutsva.
Kero: 69 Nguyen Thong, Ward 9, Dunhu 3
Maawa ekuvhura: 13.00-17.00
Soup shop muHCMC Ndeupi une mutengo wakachipa? Mhinduro kune vese vanodya ndeye Thuy.
Quan Thuy anga achitengesa muto wegakanje kweanoda kusvika makore gumi ikozvino
Soup yemuchitoro inonhuwirira, inotapira uye inochinjika. Mundiro izere nenyama yegakanje, huku, nyama yakagayiwa nemazai ane mafuta ezvihuta. Iyo sevhisi inokurumidza kwazvo, kunze kweiyo yakakurumbira crab soup, kune zvakare spring roll inovawo chikafu chinoyevedza chisingafanirwe kupotsa chero munhu.
Zvitoro zvine mukurumbira uye zvinonaka zvekanje soup muSaigon – Ho Chi Minh Guta
Kero: 40 Lot O, Vinh Hoi Residence, Ward 9, Dunhu 4
Maawa ekuvhura: 16.30-20.00
Sezvo yakavhurika kwe4 maawa mapfupi, kana ukasakurumidza, haugone kunakidzwa nemuto unonaka paDung restaurant.
Muto wegakanje wendove unowedzerwa nehafu ine hutano hwenguruve huropi
Nyama yegakanje mundiro inoiswawo mune yakawandisa, mukuwedzera, kune zvakare North Thao mazai, coriander, mhiripiri, uye nyama yenguruve. Sopu pano yakanyanyisa, inonhuhwirira, uye kana yakatorwa nefrosiothie yemuchero, hapana chaizvoizvo imwe inonaka inogona kuenzaniswa nayo.
READ Cách nấu lẩu cua đồng thơm ngon, nhiều gạch vàng ươm | Excitinghochiminhcity
9-Co Lan Restaurant
Kero: 239 Luong Nhu Hoc, Ward 12, Dunhu 5
Maawa ekuvhura: 16.00-20.00
Mutengo: 10,000-30,000 VND
Wakamboravira muto wegakanje une mabubu ehove here? Kana zvisina kudaro, chokwadi nzvimbo yekudyira yaAmai Lan inofanira kunge iri pane “must try” rondedzero yevashanyi ivavo.
Muto wegakanje wakajairwa une zvimedu zvihombe zvenyama yegakanje unoita kuti vashanyi vanzwe kutonhorera
Kunze kwenyama yegakanje, mbiya yega yega yesoup inowedzerwa nezvimwe zvinhu zvakawanda zvakaita sehowa, chibage, hupfu, nezvimwewo. Muridzi ari nyore kuenda, ane shungu, akagadzirira kuisa mazai akawanda ezvihuta mundiro yekudyira pasina kubhadhara. kuwedzera.
Kero: 68/8 Ho Thi Ky, Ruwa 10
Maawa ekuvhura: 13.00-22.00
Iri pedyo nemusika wemaruva wakazara, Thao’s crab soup shop inzvimbo inonaka yekudya inodiwa nevanhu vakawanda veSaigon.
Sopu inobikwa nemuridzi ane gakanje uye uropi hwenguruve, nekunhuhwirira kwemakwenzi ekuchamhembe
Mazai eBac Thao anogadzirwa zvakanyanyisa, kwete kungobikwa chete asiwo akanyoroveswa nemvura yakadzika yeraimu, saka achave akachena kunze, grey mukati. Paunenge uchifarira muto, zvirokwazvo vanodya vese vanozonakidzwa nekunhuhwirira kunonaka kwakasanganiswa nemunyu wakakwana wenyama yegakanje.
Zvitoro zvinonaka zvekanje soup muguta zvakakodzera kunakidzwa nazvo
Maawa ekuvhura: 14.00-18.00
Kuda kunakirwa nechikafu muto wegakanjeThiec Market inzvimbo inonaka yekudya yaunofanirwa kuisa muhomwe.
Chitoro chave chiripo kweanopfuura makore mashanu nekunaka kwegakanje soup
Ndosaka paine vashanyi vasingaverengeki vekumba nekune dzimwe nyika pavanoshanyira Saigon, ivo vanofanirwa kuenda kumusika weThiec kuti vafarire muto wegakanje. Muto wechitoro une kuravira kwechisikigo kunotapira, nyama yegakanje yakapfava uye yakachena, kana yangodyiwa, inovimbiswa kurangarirwa nekusingaperi.
12-Le Quang Dinh Restaurant
Kero: 278 Le Quang Dinh, Dunhu reBinh Thanh
Maawa ekuvhura: 14.00-22.30
Neanopfuura makore gumi nemashanu ekutengesa soup, shopu yesoup iri mumugwagwa weLe Quang Dinh yakagamuchira rutsigiro uye kuvimba nevatengi vazhinji.
Muto unonaka unoravira uri pamuromo werurimi, zvichiita kuti zviomere munhu wese wemhuri kukanganwa.
Mumuto, kunze kwenyama yegakanje, kunewo huropi hwenguruve, nyama yakakanyiwa uye mazai ezvihuta. Mazai anobikwa, ogochwa nemafuta, saka kana uchinakidzwa nawo, anonaka uye anonaka.
13-Tran Doan Khanh Restaurant
Kero: 6 Tran Doan Khanh, Dunhu 1
Maawa ekuvhura: 9.00-20.00
Sechitoro chesoup chine mitengo inokwanisika, hazvishamisi Tran Doan Khanh gakanje soup inogona kukwezva vazhinji vanodya kuti vanakirwe.
Muto wacho zvese zvakachipa uye zvemhando yepamusoro, nekunaka kwakasiyana
Kana uchinge waravira muto muchitoro, haufe wakakanganwa nhamba yekutanga kuravira kwendiro iyi. Panguva imwecheteyo, nekuti zvakare iri pedyo nechikoro, kune zvizvarwa zvakawanda zvevadzidzi zvakabatanidzwa nechitoro, kazhinji vachiuya pano kuzonakidzwa nesobho inonaka.
Wongororo yezvinonaka uye zvakachipa magaka soup zvitoro muSaigon – Ho Chi Minh Guta
14-Dang Van Ngu Restaurant
Kero: 176 Dang Van Ngu, Phu Nhuan District
Maawa ekuvhura: 16.00-21.00
Mutengo: 15,000-25,000 VND
Pakati pemaresitorendi epamusoro muto wegakanje Chikafu chinonaka muSaigon zvakare chine soup shop paDang Van Ngu mugwagwa, mugwagwa wechikafu mudunhu rePhu Nhuan.
READ Top 10 quán bánh xèo Cần Thơ thơm ngon hấp dẫn, đậm vị miền Tây | Excitinghochiminhcity
Iyo sopu ndiro inozadzwa nezvakawanda zvinonaka zvinonaka
Kwete chete kunaka asiwo nzira iyo soup inogadzirwa muresitorendi inonyanya kukosha. Nekuda kweizvozvo, soup pano inogara iine kunhuhwirira kwakanaka uye kwehunhu, ichiita kuti chero munhu akaidya kamwe chete anofanira kuyeuka zvachose.
Kero: 250 Phu Gia, Ward 1, Dunhu 6
Maawa ekuvhura: 8.00-23.00
Mutengo: 4,000-50,000 VND
Kana zvasvika kune nzvimbo dzekudya muto unosarudzwa nevanhu vazhinji, 250 inogara iri chinhu chekutanga chinouya mupfungwa.
Soup inonaka yakagadzirwa nemhando dzakasiyana-siyana itsva
Soup inonaka haingonakidzi chete asiwo ine hupfumi, inonaka inonaka yezvinonhuhwira zvakawanda. Iwe unozozvida iwe paunouya pano kuzoravira muto, zvechokwadi sarudza kudzoka kuti ungonakidzwa nemazai akakangwa uye inopisa minced nyama pano.
16-Banana Masiya Anonamira Rice Resitorendi
Kero: 868 Tran Hung Dao, Ward 7, Dunhu 5
Maawa ekuvhura: 7.00-23.00
Crab soup muSaigon haina kushaikwa, asi yakasarudzika uye yakakurumbira ichiri muto weXoi La Chuoi restaurant.
Banana Leaf Sticky Crab Soup inonaka, yakatsetseka uye ine mukobvu
Nekuda kwechinyakare soup recipe, muto wegakanje paXoi La Banana une kutapira, kupfuma, uye kunoshamisa. Waedza muto wegakanje muresitorendi, nguva inotevera, nguva inotevera iwe zvechokwadi uchada kuuya pano kuti unakirwe nemuto chete.
17-Capital Market Shop
Kero: Capital Market, Phung Hung-Lao Tu junction, Dunhu 5
Hamusati mauya kuzodya muto wegakanje PaCapital Market, zvinoita sekunge hausati wamboravira soup inonaka yechokwadi.
Kunyangwe ichingori chiteshi chenzira, nyama yenguruve brain crab soup ichiri kutengeswa kunze
Huropi yenguruve yakarukwa, kana ichidyiwa, ine girizi inonaka, yakasanganiswa nemafuta mashoma. Ichi chikafu chinovaka muviri zvakanyanya kune vanorwara, vanodiwa nevabereki vazhinji. Huropi yenguruve yakashumirwa negakanje nyama zvechokwadi chikafu chinonaka chemhando yepamusoro.
Top inonaka gakanje soup zvitoro muHCMC
Kero: 291/19 Vo Van Tan, Ward 5, Dunhu 3
Maawa ekuvhura: 12.00-20.00 yen
Iva nzvimbo yekutanga kuvhura ndiro muto wegakanje Iyo yakakurumbira Bac Thao zai, yauya kuSaigon, inofanirwa kuiedza paPich restaurant.
Muto wegakanje unoshandiswa nekunhuhwirira mazai eNorth Thao anoita kuti vanodya vade murudo
Mazai akapfava uye anotsenga. Muto wegakanje unobikwa unopfakanyika, une muto wakakora, uye unowedzera huropi hwenguruve necoriander mukati, zvichiita kuti kunakirwa kwendiro kuwedzere kuyevedza uye kupfuma.
Kero: C200/18 Xóm Chieu, Dunhu 4
Maawa ekuvhura: 16.00-22.00
Mutengo: 15,000-40,000 VND
Kuenderera mberi nechitoro chesopo chiri chemhando uye chinonaka is Hang’s crab soup, kero ine mukurumbira munyika yekubika.
Soup pano yakanyanyisa kunaka, inonaka uye inobata maziso
Pamusoro penyama yegakanje yakajairwa, mazai ezvihuta, nemakwenzi ekuchamhembe, mumuto, munewo chibage chinotapira uye chinokwezva maziso cheAmerica, tsvimbo dzegakanje dzeJapan uye zai repichisi. Vazhinji vanodya vakavimbisa kuti kungodya ndiro yesopo muresitorendi kwaizoita kuti vagute nekuti pane zvakawanda zvemhando uye kudya kunovaka muviri.
20-Nguyen Tri Phuong Restaurant
Kero: 322 Nguyen Tri Phuong, Ward 4, Dunhu 10
Maawa ekuvhura: 15.00-18.00
Mutengo: 10,000-40,000 VND
Kana wanga wakafinhwa nemuto wegakanje nemazai nemabhora ehove, sei usingayedze soup yakasarudzika yenyama yemombe?
Sopu ine mazai ezvihuta, nyama yegakanje, howa, nezvimwewo, sezvakangoita dzimwe nzvimbo dzakajairika soup
Nekudaro, chinhu chakasiyana ndechekuti pano chete panotenderedzwa, mabhora mahombe emombe, ane kunhuhwirira kwakapfuma kwemhiripiri, iyo inoyevedza zvakanyanya mundiro yega yega yesobho. Mabhora emombe ese akacheneswa, saka kana uchiadya, unogona kuvimbiswa kunaka.
Heano maresitorendi makumi maviri epamusoro muto wegakanje Yakakurumbira Saigon iyo vese vanodya vanofanirwa kunakidzwa. Usakanganwa kunyora chinyorwa ipapo uye gara uine super yakasarudzika uye super inonaka soups nemitengo inokwanisika kuzadza dumbu rako.
Munyori: Hong Hanh
← Wan là gì? Các loại hình kết nối phổ biến trong mạng WAN | Excitinghochiminhcity
Review khu đô thị Royal City có gì chơi? Ăn uống ở đâu? (Full) | Excitinghochiminhcity →